Alakamisy Janoary 25, 2007 Talata, Febroary 16, 2016 Douglas Karr
Tsy mpandray anjara lehibe amin'ny Wikipedia aho. Na izany aza, teo aloha dia nanome vola kely ho an'ny fototra aho ary nanome atiny ho an'ny tranonkalany. Tiako ny Wikipedia… Mampiasa azy io foana aho ary ilazako matetika ao amin'ny bilaogiko. Wikipedia dia nanampy ahy ihany koa - niteraka fitokonana vitsivitsy ho an'ny tranokalako ARY Wikipedia dia nanatsara ny laharan'ny tranokalako tamin'ny alàlan'ny rohy niverina tamiko. Raha jerena io fomba fijery io, moa ve tsy fanomezana izany